कोरोनाले ठप्प पढाइ असोजदेखि शुरु हुने – NepalajaMedia
September 6, 2020 318
काठमाडौं, २१ भदाै । पाँच महिनादेखि कोरोनाका कारण पठनपाठन ठप्प भएको सामुदायिक विद्यालय र केही निजी विद्यालयमा असोज १ गतेबाट पढाइ शुरु हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जारी गरी पठनपाठन शुरु गर्ने भएको हो । सो निर्देशिका दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वैकल्पिक विधिबाट तत्काल पठनपाठन शुरु गराउन र निजी विद्यालयलाई सो माध्यमबाट पढाएबापत शुल्क लिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका तयार गर्न लाग्नुभएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्भवतः मंगलबारभित्र निर्देशिका जारी गरी असोजबाट पठनपाठन शुरु गर्न देशैभरका विद्यालयलाई निर्देशन दिनुहुने सम्भावना रहेको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी निर्देशिका सार्वजनिक गरी वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन शुरु गरिने बताउनुभएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निर्देशिका जारी भएपछि सबै विद्यालयले अनिवार्यरुपमा पठनपाठन शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्भवतः असोज महिनाभित्र निर्देशिकाअनुसार पढाइ शुरु गर्नुपर्नेछ ।’ यो खबर अजाको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
Prevभारतमा कोरोनाको डरलाग्दो ग्राफ- अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ९० हजार दैनिक संक्रमित फेला !
Nextगोप्य अंगको परिक्षण गर्नुपर्छ भनेर सुइ लगाएपछि…..
जापानमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि, आइतबारसम्म ३९ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र, सुर्य एमाले, माओवादी केन्द्र प्रचण्डको हुने !
पुजा गर्दा घ्यूको दियो भए वायातर्फ र तेलको दियो भए दायाँ तर्फ राख्नुहोस्, चम्किन्छ भाग्य
पार्किङमा राखिएको ट्याङ्कार विस्फोट, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (8182)